ကော်လာနှင့်အတူလှပသောဝတ်စုံ - အမျိုးအစားများနှင့်မော်ဒယ်များကော်လာ၏: ဖြုတ်ထိန်သိမ်း, ထိုးပြီး, ကော်လာ, turn-Down, လှေ, အင်္ဂလိပ်
တင့်တယ်, နူးညံ့သိမ်မွေ့သော, ဇိမ်ခံစားဆင်ယင် - ထာသောတံပိုးမှုတ်အဆင်းလှသောလိင်။ အဝတ်ဒီခမ်းနားအမြင်ဒီတော့ subservient ဖက်ရှင်ဖြစ်သောပြောင်းလဲမှု, စုပ်ယူထားပါသည်။ ကော်လာနှင့်အတူဝတ်စားဆင်ယင် - ရက်နှင့်အားလပ်ရက်များဝယ်လိုအားခါးပန်းများတွင်များပါတယ်။
ဒါဟာကော်လာကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းရိုးရှင်းတဲ့ပုံမှန်ခါးပန်းကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ကြောင်းကိုအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုအောငျပှဲခံစင်မြင့်သို့ပြန်ရောက်ကော်လာနှင့်အတူလွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်စားဆင်ယင်အတွက်ဖက်ရှင်, အအလှအပဘက်စုံသုံးနှင့်စုံစုံကြော့ရှင်း၏စိတ်နှလုံးအနိုင်ရ။ ဒါဟာလူကြိုက်အများဆုံး option ကိုပိုပြီးတရားဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်သတိပြုပါဖို့မခက်ခဲပေမယ့်တစ်ကော်လာနှင့်အတူအမြဲစတိုင်အနက်ရောင်ဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အရောင်လည်း, ထိုဖက်ရှင်ဗီရိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစဉ်သတိပြုရကျိုးနပ်သည်ပေမယ့်။ ကောင်းတဲ့ကော်လာနှင့်အတူအလှဆင်အမျိုးမျိုးသောအထည် (ဝါဂွမ်း, ဂျာစီ, ပိုးဖဲ), ဆင်မြန်း၏ လုပ်. , ကြော့ရှင်းအတွင်းဝှက်ထားလျက် coquetry ၏ပုံသဏ်ဌာ, ပေးပါ။ အဝတ်အစား၏အဓိကထည်ဟာကော်လာ၏အရောင်နဲ့မတူဘဲအတွက်အခါမသိမသာကွဲပြားသက်ဆိုင်ရာစဉ်းစားသည်။ ဆုံးအံ့သြစရာအလွန်ကို item အဆိုပါ monotony အကြောင်းပြောဆိုကြောင်းဤမျှလောက်များစွာသောမူကွဲရှိပါတယ်ကြောင့်မလိုအပ်ပါဘူး:
ညှပ် / ထိန်သိမ်း / လွှဲ / Keel;
အီး / အင်္ဂလိပ်;
သိုးမွှေးထိုး / ဇာပန်းထည်။
ကော်လာ၏ဤအမျိုးအစားနှင့်အတူအဝတ်အထည်အမြဲဖက်ရှင်ကိုလိုက်နာသူမိန်းကလေးငယ်ရဲ့ဗီရိုထဲမှာလက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထိန်သိမ်း၏မူလ version ကိုဆွဲဆောင်မှုကိုပိုမိုဖြေလျော့ပေးခြင်းအသွင်အပြင်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဣတ္ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါညှပ်တဲ့သပ်သပ်ရပ်ရပ်ခြံ၌ကျယ်ပြန့်တီးဝိုင်းအဖြစ်ရှင်းလင်းရေးလည်ပင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကော်လာ၏ပုံစံဝတ်စားဆင်ယင်မှကော်လာပုံစံအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကွဲပြားလိမ့်မည်။
တစ်မောတီးဝိုင်းနှင့်အတူသတိပညာဗားရှင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အချို့သောဂျမြားမှာညှပ်ပုံရိပ်ကိုများ၏ဗဟိုဒြပ်စင်အဖြစ်အထင်ကြီးပုံပန်းသဏ္ဌာန်, ရှိပါတယ်။ အဆိုပါကော်လာခြားနားသောမော်ဒယ်များရှိပါတယ်သော်လည်းအသုံးအများဆုံးညှပ်, တပြင်လုံးကိုအရာ၏အတိုင်းပစ္စည်းနှင့်အတူတူပင်အရောင်အတွက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ image ကို, ကလစ်ရင်ထိုးဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆွဲပြားနှင့်အတူကြာမြင့်စွာကွင်းဆက်ကိုအလှဆင်ဖို့နည်းနည်းအလိုဆန္ဒလည်းမရှိပါ။
သူတို့ရဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့် polyvariant ဗီရိုပိုနှစ်သက်သူများအတွက်အလွန်စွယ်စုံဗားရှင်း။ ဒီခေတ်မှီ bar ကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်တစ်ဦးကမော်ဒယ်တစ်ဦးစုံစုံစားဆင်ယင်အတွက် "ဟုအဆိုပါလက်ကောက်ဝတ်၏ဇာတ်ကားလှည့်" ။ အဆုံးစွန်သောလွယ်ကူစွာ paytekami သို့မဟုတ်ပုတီးများနှင့်ကဲဒါဆိုရင်တော့အပေါ်အလှဆင်အဆိုပါဇာကော်လာအစားထိုးခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနေသည်: နူးညံ့သိမ်မွေ့သောရင်ခုန်စရာလေးကိုချုံ့အစားထိုးထားသည်။ သားမွေးအပိုင်းအစ - - တစ်ကော်လာရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, အဝတ်လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်အင်္ကျီတစ်ခုဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စားဆင်ယင်ပေါ်တွင်အလွယ်တကူအစားထိုးမမှန်သောကော်လာများအပြင်ကောင်းပါတယ်။
ဇာကော်လာ - ကိုဝေးလံသောအတိတ်ထဲကနေနှုတ်ခွန်းဆက်စကား။ ရှေးပဝေအချိန်ကတည်းကအမျိုးသမီးတွေသင်၏အဝတ် unpretentious ဇာကော်လာအပြည့်အဝသူတို့ထဲကကိုဖန်ဆင်းသို့မဟုတ်အစွန်းအပေါ် sheathing အလှဆင်ဖို့ပိုနှစ်သက်။ ယနေ့ဖြစ်ရပ်မှန်များတခါထပ်ရင်ခုန်စရာပေါင်းစပ်မျက်နှာသာ။ Dreamy သဘောသဘာဝကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတစ်ခုသက်ပြင်းချရှူနိုင် - ယခုရာသီသည်လမ်းကြောင်းသစ်မှာသူတို့ရဲ့ဦးစားပေး:
အဖြူရောင်ကော်လာနှင့်အတူအနက်ရောင်ဝတ်စုံ - ခေါင်းဆောင်ပေါင်းစပ်ခြားနားနေဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမလျော့နည်းသန့်စင်ပြီးထုတ်ကုန်အနက်ရောင် openwork နှင့်အတူအဝါနုရောင်ရှိသောလှပါတယ်။
ဒီ model များတွင်အဝတ်အစားများ၏ sleeveless ဇာအပိုင်းအစချစ်စရာကောင်းတဲ့ openwork "အတောင်ပံ။ " ကော်ပီပွားယူနိုင်ပါသည်
ဒါဟာအဖြူရောင်ကော်လာနှင့်အင်္ကျီလက်ပေါ်ဇာ၏ cuffs နှင့်အတူမည်သည့်အခွအေနစတိုင်စားဆင်ယင်အတွက်သင့်လျော်သည်။
ထူးကဲခြင်းနှင့်ရင်ဘတ်လိုင်းပေါ် openwork ဆက်လက်သောဇိမ်ခံအဝတ်လှပါတယ်။
Unlimited ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် understeer ကြော့ရှင်းရပ်တည်ချက်-up, ကော်လာနှင့်အတူတစ်စားဆင်ယင်ရှိပါတယ်။ ဒီအမျိုးသမီး၏ဗီရိုထဲမှာနီးပါးတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်လာသည်သောဤစတိုင်, ကြောင့်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံလူကြိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပရောပ, fluffy အဝတ်, ခလုတ်တွေနဲ့ဘား, ဇာ, sequins - သို့သော်ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်နာများစိတ်ဝင်စားဖို့ဒြပ်စင်နှင့်အတူထိန်သိမ်းချိတ်ဆက်ပြီးနောက်ထပ်ဝင်ကြပြီ။ အဆိုပါ neckline ပွင့်လင်းလျှင်ရပ်တည်ချက်-up, ကော်လာနှင့်ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက်နှင့်အတူပိတ်ထားသော်စားဆင်ယင်, sexy ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဣတ္ရင်ပတ်ကိုဧရိယာဇာ၏ဖန်ဆင်းသောမော်ဒယ်များပေးအပ်သည်။
ကျောင်းသူဆိုဗီယက်ကျောင်းများအခြေခံလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လာဘယ်သူတူနောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်, ထိုကဲ့သို့သောသပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ 'မှန်ကန်သော' 'ကော်လာသောနန်းသက်ဖက်ရှင့် Olympus ထင်ကြလိမ့်မယ်။ Turn-down version ကိုယင်း၏အနားထည်ပေါ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ကြကြောင်းအတွက်ကွဲပြားနေသည်။ ကော်လာနှင့်အတူစားဆင်ယင်အမြဲအမျိုးသမီး Locker အခန်းတစ်ခန်း၌မိမိတို့နေရာအရပ်ကိုတွေ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးရာသီအတွက်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးမှာခဲ့ပါတယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအဝတ်အစားတွေရဲ့အရောင်ကို ဆက်စပ်. အတွက်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသော, ခြားနားသောအရောင်အဆင်းအတွက်ကွပ်မျက်ခံရမယ်ဆိုရင်, ဒီဒြပ်စင်, ဗဟိုဖြစ်လာသည်။
အဆိုပါကော်လာတစ်ဦးဘဲဥပုံ, ဒါပေမယ့်လည်းတြိဂံ, စတုဂံသာရှိနိုင်ပါသည်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
နောက်ထပ်လိမ်းအာရုံစိုက် - တစ်လည်ဆွဲသို့မဟုတ်ပုတီးဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖယ်ထုတ်ပစ်သည်ကျေးဇူးတင်စကားသောကြွယ်ဝသောပုံစံမျိုး။ ကော်လာပုတီး, ပုတီး, သတ္တု fittings, paillettes, အချည်သို့မဟုတ်တိပ်ခွေ crystals ၏ပန်းအလှဆင်။
မကြာခဏတူညီတဲ့ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်အရောင်အတွက်ကော်လာနှင့် cuffs နှင့်အတူစားဆင်ယင်ပုံပေါ်ပါတယ်။
အများအပြားကခေါင်းနှစ်လုံး-အလင်း, ဒါပေမယ့်ဣတ္လှေလည်ပင်း neckline လှပ clavicle နှင့်သွယ်လည်ပင်း၏မခိုင်မြဲပုံမှုကိုအလေးအနက်, ထိုစားဆင်ယင်၏အထက်ပိုင်းဘောင်ခတ်။ မော်ဒယ်စားဆင်ယင်စိမ်းလန်းစိုပြေပေါင်ဆီသို့ကျဉ်းပခုံးဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်သူကိုသစ်တော်သီးမိန်းကလေးငယ်များအမျိုးအစားများအတွက်စံပြဖြစ်ပါသည်:
ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ Draperies အမြင်အာရုံပခုံးနှင့်ခါးကြားကခြားနားချက်အားကောင်းလာစေပါတယ်။
လှေစိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့အောက်ခြေနှင့်အတူကြော့ရှင်းရှည်လျားညနပေိုငျးဆင်မြန်းခြင်းနှင့် coquettish မော်ဒယ်များအလေးပေးဖော်ပြသည်။
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် cutout တစ်ခု elongated အ form မှာတစ်ကော်လာဖွဲ့စည်း, ထည်ချွတ်ဖြည့်စေနိုင်သည်။
Cutout တစ်ခါတစ်ရံကော်လာချွတ်ခြားနားကော်ပီပွားယူ: ကောင်းသောအဖြူရောင်ကော်လာနှင့်အတူအပြာသို့မဟုတ်အနက်ရောင်ဝတ်စုံကြည့်အဖြစ်။
reverie နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း၏ပုံရိပ်အတွက်မှတ်စုများ Make တစ်စားဆင်ယင်မှုအတွက်ထိုးပြီးကော်လာကူညီပေးပါမည်။ မကြာသေးမီကထိုးပြီးအဝတ်လူကြိုက်များ၏မှတ်တမ်းများ beats, ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့အပိုင်းအစအတော်လေးဒီလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌တည်ရှိ၏။ အဆိုပါဇာထိုးအနုပညာထိုကဲ့သို့သောကြွယ်ဝသောလက်နက်တိုက်ရှိပြီးအထူးသဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့:
အဆိုပါကော်လာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတိုင်အတွက်စားဆင်ယင်မှုအတွက်စုံလင်သော openwork ဒြပ်စင်ခြင်းမရှိဘဲ binding တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာရှိနိုင်ပါသည်။
ဇာဆောင်ပုဒ်ကွက်, ရက်အရောင်များ, အရွက်, နှင်းခဲပုံစံများ, laconic connection ကို slot နှစ်ခုနှင့်အစိုင်အခဲဒြပ်စင်တင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဘို့အ retro လေးကို ဂျိန်း Eyre ရဲ့ style အတွက်ကျယ်ပြန့်ဇာဗားရှင်းကိုက်ညီ။
သာမန်ထက် motif ပွင့်လင်းစားဆင်ယင်ကြိုးနှင့်အတူဝတ်ဆင်တ-piece အကော်လာ၏ပုံရိပ်ကိုစေမည်။
မူလကထိုးပြီးကော်လာ-bar ကို, ခလုတ်ကို-down တွေနဲ့အလှဆင်ရိုးရှင်းသောမိုနိုခရုမ်စားဆင်ယင်, လှပါတယ်။
အရိုးရှင်းဆုံးစားဆင်ယင်မှု၏မီးမောင်းထိုးပြလွှဲ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရေတံခွန်ဖြတ်မည်။ တကယ်ရေစီးဆင်းမှုသို့မဟုတ်တစ်ပုခက်လွှဲဆင်တူတဲ့လှပသောစီးသောခြံဖွဲ့စည်းသည့် neckline မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ် draping ။ မည်သည့် draperies ချဉ်းကပ်၏ဤအမျိုးအစားနှင့်အတူအသံအတိုးအကျယ်, ကော်လာစားဆင်ယင်တိုးမြှင့်ကတည်းကအမြင်အာရုံရန်ဆန္ဒရှိသူကိုသေးငယ်တဲ့ရင်သားနှင့်အတူမင်းသမီးအခြေအနေဆိုးအားပြုပြင်ရန်။
ခေတ်မီ၏ဤအမျိုးအစားအပြည့်အဝခံတွင်းနှင့်အတူကော်လာလွှဲကြော့ရှင်းဂရိ togas ဆောင်ကြဉ်းအဖြစ်။ နေ့စဉ်များအတွက်ရေတိမ်ပိုင်းဖြတ်နဲ့မော်ဒယ်ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ အထူးရက်စွဲများလွတ်လပ်မှုကိုတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဘွဲ့ပေး, ဒါကြောင့်ဖြတ်အတိမ်အနက်ကိုသိသိသာသာပိုပြီးခက်ခဲတဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဖြတ်ထည်များ၏အသုံးအများဆုံးအပိုင်းအစတူညီတဲ့အရောင်၏ဖန်ဆင်းထားသည်, ထိုကော်လာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသေံခွဲဝေသည်အဘယ်မှာရှိမော်ဒယ်များရှိပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စတိုင်ကြော့ရှင်းခြင်းနှင့်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအဘို့အလူသိများသည်။ အင်္ဂလိပ်ကော်လာ ကအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါဝင်သော otvorotny ထေူ - အောက်ကကော်လာနှင့်ထိုး၏ထိပ်, ကလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ထိုက်တန်လှပါတယ်။ ဤသည်မှာအပိုင်းအစယောက်ျားရဲ့ဂျာကင်အင်္ကျီဒီဇိုင်နာများကမွေးစားခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာဖြတ်ဆင်မြန်းအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။ ယနေ့ဒီမော်ဒယ်ဟာဂန္စားဆင်ယင်ဆင်တူသည်။ ဒါဟာအလားတူစတိုင်တဲ့လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသမီးရင်ဆိုင်ဖို့ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်တင်းကျပ်သောစတိုင်လှပသောရင်သားနဲ့ပါးလွှာကိန်းဂဏန်းအားဖြင့်ငယ်ရွယ်ယောပူဇော်:
ဿုံ Office ကိုအင်္ဂလိပ်ကော်လာကျောခိုင်းထားသောတန်ချိန်နှင့်အတူပုံစံ-သငျ့ကို double-ရင်သားကင်ဆာစားဆင်ယင်။
လက်ရှိရာသီဆင်မြန်း၏စတိုင်များအမျိုးမျိုးကြွယ်ဝနေသည်။ ဒါပေမယ့်စားဆင်ယင်၏လှပသောကော်လာ - ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ။ ဖက်ရှင်ဖြစ်ပေမယ့်သင့်တော်တဲ့ option ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရန်:
အားလုံးမှတ်တမ်းများဝယ်လိုအားတစ်ရပ်တည်ချက်ကော်လာနှင့်အတူစတိုင်အမှုရှိပြီး turn-Down ။
သင့်ရဲ့ဗီရိုပု replenish နိုင်ပါတယ် ကောင်းကင်ဘားစားဆင်ယင် ဇာသို့မဟုတ်ဇာထိုးပန်းထိုး attribute ကိုအတူအလှဆင်။
turndown သို့မဟုတ် English ဒြပ်စင်နဲ့စကတ်-နေရောင်နဲ့အတူသဟဇာတမော်ဒယ်များ၏ရင်ခုန်စရာပုံရိပ်သည်။
ချစ်စရာကောင်းကြိုးနှံ မော်ဒယ်များပိတ်ထား သတို့သမီးရဲ့ Charm မှပစ္စုပ္ပန်သူတို့၏အမျိုးအပေါငျးတို့သအာရုံကိုစုဆောင်း, သို့သော်ယခုအချိန်တွင်၏ပွဲနှင့်ထူးခြားမှုဖြစ်သည်။ ဖက်ရှင်အတွက်အတိတ်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပွင့်လင်းလည်ပင်းနှင့်ရပ်တည်ချက်-up, ကော်လာနှင့်အတူမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံနှင့်အတူဝတ်စားဆင်ယင်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအဖြစ်အပျက်ချမ်းရာသီအတွင်းဖြစ်ပေါ်လျှင်၎င်းသည်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်မှာ "ပိတ်ထားတဲ့" သာအမည်ခံ၏ဝိသေသ, ဇာ၏ဖန်ဆင်းထားသည်ဆိုပါက။ တစ်ဦးအမှုထမ်းလည်ပင်းနှင့်အတူကြော့မော်ဒယ်။
အစစ်အမှန်ဖက်ရှင်များအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့အကြံဉာဏ်ကို - swimsuit ကိန်းဂဏန်းများအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်နှင့်အတူ Swimsuit
ရင်သား - ကုသမှု
Ivanka Trump မျက်စိအရောင်ကိုပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဘယျကွောငျ့အလိုတခုတည်း?
တဆေးနှင့်အတူ pancakes - တစ်စိမ်းလန်းစိုပြေခြင်းနှင့်အရသာရှိတဲ့ရယူထားသောများအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
အမဲသားနှင့်အတူ multivarka အတွက် Pilaf - ဦးဇျဘ၏အရသာဟင်းလျာများ၏အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
ပန်းခြံလုပ်သူကို Disneyland န်ထမ်း၏ 15 လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကွဲပြားခြားနားသောမျက်လုံးများမှတဆင့်ကြည့်ရှု